HomeAfaan OromooSBO: Mana hidhaa Naannoo Tigiraay keessa waggaa 19 kan ture
(SBO Guraandhala 9 2020) — Qabsa’aa Oromoo qabsoo Bilisummaa Oromoo karaa dhihaa keessatti humna jajjabee jedhamuun beekkamu keessatti qooda isaa bahataa ture, Kan Maqaa qabsoo Dachaatuu jedhamuun beekkamu maqaan maatiin isaa isaaf baase Waaqgaarii Kabaa Nagahoo dhalataa Godina Wallaggaa Lixaa Mandii bakka Gabaa Abbaa Cannaaluu jedhamutti kan dhalate, oggaa ta’u namni kun waggaa dgeeraa booda mana hidhaatii bahee agarre.
Namni kun waggaa 19 mana hidhaa Naannoo tigraay Adde Nibriit jedhamu lafa jalatti hidhameeti kanture.Mana hidhaa kana keessatti hiraarfamaa erga tureen booda achii baasanii naannoo Affaaritti gatan. Saniin booda namoonni gargaaranii haga Magaalaa Kamisee dhufee achitti agarre.
“SEENAA AJAA’IBAA KANA DUBBISAA HUBADHAA!!
Maqaan isaa Waaq-gaarii Kaabaa Naga’oo jedhama bara 1993 akka lakkoobsa Habashaatti Mana Hidhaa Tigraayi keessa maqaan isaa ADDA NABRIT jedham keessatti qaama guutuudhaan seenee achi keessatti dararaa ulee bira dabree elitrikiidhaan hanga dhiiga keessaa xuuxuutti roorrifameen booda tasa osoo hin yaadamin bara 19 baada hidhaa keessa tureen booda akkuma tasaa halkan dhufanii du’uu feetamoo? Hidhaan sitti dabalamuu feetamoo? Bahuu barbaaddaa? Jedhameen gaafatamee jefha.
Haa gaafatamuu malee ni ta’a jedhee waanin hin yaadneefis du’uun barbaada jedheen murteeffadhee jedha sana booda ani bara 19 guutuu qophaa kiyyan hidhamee Kutaa lafa jalaa keessatti jedha garuu uraan xiqqoon tokko waan jirtuuf al tokko tokko namoota ollaa kiyya jiran sagaleedhaan Wal dubbifnaa ijaan Wal hin arginu maleedhaa jedha. Namoota sana keessaa maqaa nama 4n yaadadhaa jedhe. Isaanis:
1. Mahammad/Ahmada/ Idris Wallo
2. Mahammad Abbaa Garoo Jimma
3. Abdallaa Mahammad Shaashamannee.
4. Taajuddiin Harageedha.
Namoota kana qophaan yaadahaa jedha. Waan na filachiisame kana yeroon isaan dhageessisee silaa hin ta’uutii yoo ta’e garuu hanga dandeesse baafachuu yaalii naan jedhanii jedha. Maalumaafuu anis hin seeen turee halkan sa’atii 8 tti hulaan bara 19 guutuu natti cufamte banamtee hidhaa tokko malee konkolaataarratti fe’amee gara Adda Giraat na jallisanii sana Naannoo Affaar keessatti lammaffaa keessaa sa’atii 8tti na darbanii namni sitti dhufaa eegi naan jedhanii deemanii jedha.
Xiqqoo booda namoonni rifeensa kalaalee qawwee baatan lama natti dhufaniiti na gaafatanii Afaan walitti wallaallee jedha qabanii gara Mootummaa Raayyaatti Kan biyya sana keessa jirutti halkanuma San na geessanii isaan saniin ani fayyaa hin qabuutii bakkan jirus waan beekuu garuu ani Oromoodhaa baadaan jedheenii booda isaan sunis Gara Miillee na’erganii jedha namtichi Miilletti na qunname osoo bilbilaan Afaan Oromoo dubbatuu yeroon dhagehe booheetin ati Oromoo baadaa taatee ani nama Hidhaa keessa bara 19 hidhamee bahaa jiru yeroon jedheen Innis booheeti garuu kiisaahis waa hin qabuu Baankiinis Naannoo kana hin jiru baada naan jedheen booda Uffatuma namni achitti gate natti uffiseeti asiin gara Baatee fii Kamisee jedhamu yoo geesse Oromoonni Wallaggaa guutan baada naan jedheen booda konkolaataarra na kaahee Abbaan konkolaataas hanga KONBOLCHAA baada na fidee booda konkolaataa Kamiseerra na kaahee yeroon Kamisee seenu halkan dukkanaahee garan seenu dhabee Waajira Poolisii bira dhaqee ani akkana akkana yeroon jedheen deemi asii jedhanii na’arihanii jedha.
Garan deemu hin qabu waan achuma dura dideen bulee ganama ka’eetan akkanumatti osoon jooruu namoota wehii yeroon gaafahu ani garuma konbolchaan deebihaa jiraa isaan sunis baajaajiirra na kaahanii gara Magaalaa walakkaatti akkan bu’u na godhanii jedha. Yeroon baajaajii kore baajaajii kanarratti ALAABAA A.B.O.n argeeti taajjabeetin Abbaa Baajaajii yeroon gaafadhe kuni bar Alaabaa A.B.O. jedheeti Waajira fuula duratti dhaqee buuse. Sana Warra Jila Waajira kana eebbisuun dhufeen Wal argee bara 19 booda aduu fii ji’a akkasumas namaan walitti makamee jedha.”
Abdiif Gaachannii Uummata Oromoo #WBO‘n Zoonii Kibbaa Oromiyaa kan #Humna Addaa Waraana Bilisummaa Oromoo dheeda Coqorsaa Liiban (Coqorsaa Liiban Oromo Liberation army Specially forces) jedhamuu Godina Gujii bahaa Aanaa Gumii Eeldalloo Ganda #Boobaa keessaatti edaa halkan keessaa sa’aatii 9:00 irraa jalqabee #Kaambii RIB irrattii tarkaanffii Cimaa fudhachuun, RIB irraa 20 battaala yoo ajjeesu 17 ammoo madoon adabee jiraa. Haleellaa fi tarkaanfii laaleessaan waraana goolessituu diinaa irraatti fudhaatu gad jabeessee kan itti fufuu tahuu Ajajaa Ol-aanaa Waraana Bilisummaa Oromoo AO WBO ifa taasisee jiraa. #halon_warraa_dhiiraa_oolte_hin_bultu! Akkuuma jedhamu, waraanni diinaa kan WBOn tarkaanfii irraatti fudhatee kunniin kanneen guyyaa kalee uummaata nagaatti dhukaasa banuun jaarsa tokko ajjeesaniidha.
Gadaan Gadaa Xumuraa Garbummaati!.